घोराही वडा नम्वर १६मा अध्यक्ष पदको लागी २ स्वतन्त्र गरी ७ जनाको उम्मेदवारी « Online Rapti
घोराही वडा नम्वर १६मा अध्यक्ष पदको लागी २ स्वतन्त्र गरी ७ जनाको उम्मेदवारी
दाङ, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १६ का अध्यक्ष पदका लागि ७ जनाले मनोयन दर्ता गराएका छन् । १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा (नेकपा)बाट सुरेश बहादुर केसी,नेपाली काग्रेसका ताराबहादुर डाँगी,राप्रपाका प्रकास केसी,समाजबादी पार्टीबाट बिमला पुन र स्वतन्त्रमा (नेकपा)को असन्तुष्ट पक्षबाट जगलाल चौधरी, समीर वली र पहलमान आलेले स्वतन्त्रबाट मनोयन दर्ता गराउनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय घोराहीले जनाएको छ ।
बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म मनोनयन दर्ता अन्य दलको तर्फबाट पनि भएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १६ का अध्यक्ष लक्षीमान बुढाको निधन भएपछि मंसीर १४ गतेको उपनिर्वाचनका लागि बुधबार मनोयन दर्ता गरीएको हो । उक्त वडामा ४ हजार ४ सय ५३ जना मतदाता रहेका मूख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए । ३७ बिभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह अन्तर्गत एक नगर प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडा अध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुने छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते नै मनोनयन दर्ता गरिएको थियो ।
यसैबिच,उपनिर्वाचनको मतदाता शिक्षाको लागि दाङका २६ वटा वडामा ५२ जना कर्मचारी खटाइदैछ । मतदाताहरूले हालेको मत बदर नहोस् भन्नको लागि मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षा दिनको लागि कर्मचारी खटाउन लागेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । यही मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्न लागिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जिल्ला निर्वाचन अधिकारी बुद्धि खत्रीले बताए । उपनिर्वाचन हुने दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं.३ (ख) प्रदेश सभासदस्य पद र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का मतदाताहरूलाई मतदाता शिक्षा दिन लागेको हो । मतदाताहरूलाई मतदान किन गर्ने ? कसरी मतदान गर्ने ? मतदान गरिसकेपछि मतपत्र कसरी पट्याउने ? र मतपत्रको नमुनामा नमुना मतदान समेत गरिने छ ।
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ (ख) मा ६८ हजार ७ सय १९ जना र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १६ मा ४ हजार ४ सय ५३ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । मतदाता शिक्षाको लागि २ लाख ३४ हजार रूपैयाँ बजेटसमेत छुटाइएको छ । १ वडामा २ वटा कर्मचारी खटाईने छन् भने १ कर्मचारीले ४ हजार ५ सय को दरले भत्ता उपलब्ध गराईने छ ।
प्राथमिक विद्यालय तहका शिक्षक, प्रारम्भीक बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा ग्रामीण महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूले मतदाता शिक्षामा खटिने छन्। कम्तीमा पनि एसईई पास गरेका नेपाली व्यक्तिहरू मार्फत मतदाता शिक्षा प्रदान गरिने भएको छ ।
विगतको निर्वाचनको समयमा मतदाताहरू धेरैजसो मत बदर भएको थियो । आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि मत बदर नहोस् भन्नको लागि प्रभावकारी रूपमा मतदान शिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागि निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ । त्यसैगरी उपनिर्वाचनका लागि ४ सय ५० जना कर्मचारी खटिने भएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, सहयोगी गरेर ४ सय ५० कर्मचारी खटिने भएका हुन् । जिल्लाका दुई निर्वाचन स्थानका ३४ निर्वाचन स्थललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारीहरू खटाईने मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले बताए ।
जिल्लामा एक प्रदेशसभा सदस्य र एक वडा अध्यक्षका लागि २ स्थानमा ३४ मतदान स्थल र ४२ मतदान केन्द्रहरू तोकिएको छ । ति केन्द्रहरूमा कर्मचारी खटाईने तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी मसिर १४ नजिकिँदै गर्दा जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रले निर्वाचन हुने केन्द्रहरुको स्थलगत अनुगमन र अबलोकनलाई तिब्रता दिएको छ । बिशेष गरि पश्चिम दाङमा रहेका अति संवेदनशिल,संवेदनशिल र सामान्य केन्द्रहरुमा समेत उचित सुरक्षा ब्यबस्था मिलाउन स्थलगत अनुगमन जिल्ला सुरक्षा संयन्त्र पुगेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद रिजालको अगुवाइमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराई ,नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख सहितको सयुक्त टोली बबई ,शान्ति नगर र दंगीशरणका झण्डै ३१ वटा मतदान केन्द्रीयहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।